Ederede Lindsay Duran na Martech Zone |
Edemede site na Aha ya bụ Lindsay Duran
Aha ya bụ Lindsay Duran
Lindsay Duran bụ onye isi ahịa na Zilliant, ebe ọ bụ ọrụ maka ịkwalite usoro mmepe, ọgbọ na-achọ, ịre ahịa ngwaahịa, nkwukọrịta ụlọ ọrụ, nkwado ahịa, na ọnọdụ ahịa. Onye na-ahụ maka ahịa na ahịa, Duran na ụlọ ọrụ B2B rụkọrọ ọrụ iji chọpụta ma dozie ọnụahịa pụrụ iche, ire ahịa, na nsogbu ịma aka.
Monday, August 10, 2020 Monday, August 10, 2020 Aha ya bụ Lindsay Duran
Ọrịa na-efe efe COVID-19 wepụtara ihe na-akpata nsogbu na mpaghara B2B, ikekwe kachasị mkpa gbasara etu azụmahịa si eme. N'ezie, mmetụta nke ịzụ ndị ahịa adịwo ukwuu, mana kedu maka azụmaahịa na azụmaahịa? Dabere na The B2B Future Shopper Report 2020, a naanị 20% nke ndị ahịa na-azụta kpọmkwem site na ndị na-ere ahịa ahịa, gbadata site na 56% n'afọ gara aga. N'ezie, mmetụta nke Amazon Business dị ịrịba ama, mana 45% nke ndị zaghachiri nyocha ahụ kwuru na ịzụrụ